Laba qarax oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo kadhacay Mombasa, Kenya. – Radio Daljir
Mombasa, Apr 1 -Laba qarax oo sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca dad ka badan 20-qof ayaa ka dhacay magaalada xeebta leh ee Mombasa iyo deegaanka Mtwapa ee wadanka Kenya.
Qaraxa hore ayaa ka dhacay deegaanka Mtwapa oo ku dhow magaalada Mombasa, waxaana hay’adda Laan qayrta Cas ee Kenya ay xaqiijisay in hal qof uu ku geeriyooday qaraxa Mtwapa islamarkaana ay ku dhaawacmeen 24-qof oo xiligaan la geeyay xarumaha caafimaadka, laba ka mid ah dhaawacyada ayay sheegtay hay’addu inuu dhaawacoodu culusyahay.
Qaraxa labaad ayaa kadhacay goob u dhow garoonka kubadda cagta ee magaalada Mombasa,waxaana la sheegayaa inuu sababay dhaawaca 20-qof.
Saraakiisa booliska ee dalka Kenya ayaa waxaa ay sheegayaan inay baarayaan qaraxyadii ugu dambeeyay ee xalay kadhacay dalka Kenya,qaraxyadan ayaa ah kuwii ugu xooganaa ee ka dhaca dalka Kenya, tan iyo markii ay dowladda Kenya ciidamadeeda ay u dirtay dalka Soomaaliya, si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab.